स्यानिटाइजर किन्दा ध्यान दिनै पर्ने तीन कुरा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७७, २३ भाद्र मंगलवार २०:५६ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता विश्वभरि यो रोगसँग जुध्न तीनवटा सामान्य विधि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र धेरै देशका सरकारहरूले अघि सारिरहेका छन्।
व्यक्तिगत सरसफाइलाई कोरोनाभाइरसबाट जोगिने उत्तम उपाय मानिएको छ। त्यसका लागि घरभित्र बस्दा साबुनपानीको प्रयोग बढी प्रभावकारी र किफायती मानिन्छ।
तर बाहिर निस्किँदा साबुनपानी प्रयोग गर्न सम्भव नहुने हुँदा तत्काल हात सफा गर्न स्यानिटाइजर उचित मानिन्छ।
कसरी चिन्ने उपयुक्त स्यानिटाइजर?
तर के बजारमा पाइने जुनसुकै स्यानिटाइजर प्रभावकारी छन् त?यसबारे नेपालमा कुनै विस्तृत अनुसन्धान त भएको छैन तर मुख्य नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले गर्दै आएको निरीक्षण अनुगमनमा कतिपय स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन हुनसक्ने पाइएको छ।
“मापदण्ड पालना नगरेकाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने तयारीमा हामी छौँ,” उनले भने। यसबीच नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानकी वैज्ञानिक डा. टिस्टा प्रसाईँ जोशीले पनि आफूहरूले गरेको प्रारम्भिक जाँचमा कतिपय स्यानिटाइजर प्रभावकारी नभएको हुनसक्ने पाइएको जनाएकी छन्।
तर ती स्यानिटाइजरहरू सूक्ष्मजीव मार्न कति उपयोगी छन् त? डा. टिस्टा प्रसाईँ जोशी भन्छिन्, “स्यानिटाइजरले ब्याक्टेरियालाई कत्तिको मारेको छ भनेर हेर्दा ४५ प्रतिशत (नमुना)हरू प्रभावकारी देखिएनन्।”
“अहिलेको अवस्थामा सरसफाइबारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुनाले स्यानिटाइजरको महत्त्व अत्यधिक बढिरहेको छ। यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिनैपर्छ। साथै हाम्रा नियामक निकायहरूले यसको गुणस्तर र प्रभावकारिताबारे पनि ध्यान दिइरहनुपर्छ भन्ने यसले देखाउँछ,” उनले भनिन्। बिबिसी
नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप परीक्षण गर्ने बाटो खुल्यो
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ ।